သင်္ကြန် အတွက် ရွှေရင်အေး | Wutyee Food House
« နာနတ်သီး ထမင်းကြော်
သင်္ကြန် မုန့်လုပ်နည်းများ »
April 9, 2012 by chowutyee
သင်္ကြန်တွင်းလုပ်စားနိုင်ဖို့ နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းမှတ်လေးနဲ့ ရွှေရင်အေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရွှေရင်အေးမှာက သာကူ၊ မုန့်လက်ဆောင်း၊ ကျောက်ကျော အပြင် ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ပါမုန့်တို့ စုံလင်စွာ ပါဝင်ပါတယ်။ အုန်းနို့လေးနဲ့လေးမို့ ချိုစိမ့်တဲ့ အရသာလေးကို ရရှိမှာပါ။ လုပ်နည်းလေးကို ကြည့်ရအောင်…
– ရွှေရင်အေး မလုပ်ခင် ကျောက်ကျော အရင်လုပ်ကြရအောင်
၁။ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ် – ၁ပြည်
၂။ သာကူစေ့ (လုံးသေး) – ၂၀၀ဂရမ်
၃။ ကောက်ညှင်းပေါင်း – ၁၀ကျပ်သား
၅။ အုန်းသီး – ၁လုံး (အရည်ညှစ်ပြီသား)
၁။ အုန်းရည်များကို သကြားများဖြင့် သကြားအရည်ပျော်သည်အထိ ဇွန်းဖြင့် ခပ်နာနာလေး မွှေပေးထားပါ။
၂။ ပြီမှ သာကူကျိုပါမည်။ သာကူကျိုရန်အတွက် ဒယ်အိုး ၁အိုးထဲသို့ ရေပွက်ပွက်ဆူလာမှ သာကူများကို ထည့်ပြီး အဆက်မပြတ်မွှေပေးနေပါ။ သာကူစေ့များကို မပြဲစေပါနှင့်။ မမွှေပေးပါက သာကူစေ့များကပ်သွားပါလိမ့်မည်။
၃။ သာကူထဲမှ အဆံလေးများ မရှိတော့လျှင် ရပါပြီ။ ရပြီဆိုလျှင် ဇကာဖြင့် ပြန်ဆယ်ထားပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ပန်းကန်တစ်ခုထဲ သာကူ၊ ကျောက်ကျော၊ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်၊ ကောက်ညှင်းပေါင်း၊ ပါမုန့်တို့ကို တပွဲစာစီပြင်လိုက်ပါ။
၅။ ပြီမှ အုန်းနို့ရည် ယောက်ချိုဇွန်းနှင့် ၁ဇွန်းခန့်ထည့်ပြီ ရွှေရင်အေးကို ရေခဲတုံးလေးများ ထည့်ကာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in -မြန်မာ ချက်ပြုတ်နည်းများ | 21 Comments
on April 9, 2012 at 7:31 am | Reply မီးလေး
စားချင်စရာကြီးနော် သင်္ကြန်ကျရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားကြတယ် နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်း-)
on April 10, 2012 at 6:03 am | Reply chowutyee
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေနော်.. 😀
on April 9, 2012 at 8:34 am | Reply ခင်ယမုံ
သာကူစေ့..မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်..ကျောက်ကျော ကအစ်မတို့ဆီမှာရှိဘူး ညီမလေးရယ်..
on April 10, 2012 at 6:05 am | Reply chowutyee
Thanks မခင်ယမုံ.. 🙂
on April 9, 2012 at 11:26 am | Reply Carib
မုန်.လက်ဆောင်းဖတ် တွေ သာကူစေ.တွေက ဘယ်ကရမှာလဲလို.။ အဟင်.အဟင်. နိုချင်တယ်နော်။
အမြင်နဲ.ဘဲ ကျေနပ်လိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
on April 9, 2012 at 4:27 pm | Reply nyunt nyunt win
on April 10, 2012 at 6:06 am | Reply chowutyee
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်…
on April 9, 2012 at 5:48 pm | Reply MU YAR
on April 10, 2012 at 6:07 am | Reply chowutyee
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်… 😀
on April 10, 2012 at 3:15 am | Reply Su Myat
on April 10, 2012 at 6:08 am | Reply chowutyee
မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်က သင်္ကြန်တွင်း မနက်ခင်း ဈေးထဲမှာ ၀ယ်လို့ရတယ် ညီမ။ အိမ်မှာ လုပ်ချင်ရင်တော့ မုန့်လက်ဆောင်းဖတ်လုပ်နည်း http://shinlay.blogspot.com/search/label/Food ရေးထားပါတယ်…
on April 10, 2012 at 7:52 am | Reply Shwe Nann Thu
သင်္ကြန် အိမ်မှာ လုပ်စားလို့ရပီ …ေ
ကျးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ် Sis ၀တ်ရည်လေး ရေ 😀
on April 12, 2012 at 5:20 am | Reply chowutyee
on April 10, 2012 at 9:11 am | Reply Cho Wut Hmone
kha lae sar chin tal….treat me heee
on April 12, 2012 at 5:21 am | Reply chowutyee
I surely treat you, Hmone Gyi!! 😀
on April 14, 2012 at 9:17 am | Reply shinpu
on April 15, 2012 at 9:12 am | Reply chowutyee
ဟုတ်ကဲ့ လုပ်စားကြည့် ညီမ.. 🙂
on May 3, 2012 at 6:54 pm | Reply poemu seet
on May 10, 2012 at 2:53 pm | Reply About: Cho Wut Yee
[…] April 9, 2012 သင်္ကြန် အတွက် ရွှေရင်အေး […]